Shacabka Kenya oo Cod Bixin Ku Taageeray in Ciidamada Kenya ay sii Joogan Dalka Soomaaliya - iftineducation.com
Shacabka Kenya oo Cod Bixin Ku Taageeray in Ciidamada Kenya ay sii Joogan Dalka Soomaaliya
iftineducation.com – Cod laga qadaay 546 qof oo ah dad deeganka ee Magaaladda Caasimadda Nairobi waxa ay uga hadleen In Ciidamadda Kenya ay sii joogayaan Soomaaliya waxana ay u codeyeen 51 boqolkiiba in Ciidamadda Dowladda Kenya ee Hadda Soomaaliya jooga ineysan Kasoo Bixin halka 46 boqolkiiba ay u codeeyeen maya ma doneyno iney sii jogaan.
Codkan oo ay qaaden Standard Group iyo Xarunta Ipsos waxa dhamaan dadkasi la hordhigay Su’aal ahayd ma dooneysan in Ciidamadda Dowladda Kenya ay sii joogaan Dalka Soomaaliya.
Dadka Codadka dhiibtay ayaa u kala baxay taageerayaasha Xisbiyadda Jubilee iyo Cord oo kala ah Xisbiyadda Muxaafadka iyo Mucaaradka Kenya.
Taageerayaasha Xisbiga Muxaafadka Jubilee ayaa taageeray in Ciidamadda Dowladda Kenya ay sii joogaan Dalka Soomaaliya 64 boqolkiiba inkasto qeyb tiradasi ka mid ah oo gaareysa 33 boqolkiiba ay iyagana ka soo horjesteen in Soomaaliya ay sii joogaan Ciidamadda Kenya.
Dhinaca Xisbiga Mucaaradka Cord 57 boqolkiiba taageerayashiisa waxa ay u codeyeen Maya waa ineysan sii joogin halka 43 boqolkiibana ay taageereen in Ciidamadda Kenya ay sii joogaan Soomaaliya.
Ciidamadda Dowladda Kenya ayaa soo galay Dalka Soomaaliya bishii October Sanadkii 2011kii.
UNHCR oo Dib U Soo Celineysa Berito Qaxooti Soomaali Ah